အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ကြရ အောင်ပါ | Radio Veritas Asia
အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ကြရ အောင်ပါ
ဒီနေ့မှာ မိမိနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးရှိနေတဲ့ မိမိချစ်သူ၊ မိမိခင်ပွန်း(သို့) ဇနီးနဲ့ မိမိနဲ့ သွားအတူ၊ လာအတူရှိတဲ့ အနီးကပ်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ကြရ အောင်ပါ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းကောင်းရဖို့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရဖို့ဆိုရင် မိမိကစပြီး စကားစမြည်ပြောရမယ်၊ အမှုမထားတဲ့ပုံစံမျိုးမပေါ်အောင် နေတတ်ရမယ်။ မိသားစုရဲ့ အပြင်က သူငယ်ချင်းရချင်ရင်လည်း လူအများနဲ့ တွေ့ဆုံရမယ်။ ဒါမှသာ အဆက်အသွယ်တွေရပြီး ကိုယ့်ဘဝမှာ တိုးတက်မှုတွေလည်းရ လာမှဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလဲ သိမှာပါ။ လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ တွားသွားတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေမှာ လည်းသူတို့ရဲ့ ရွယ်တူတွေ့ဆုံပေးရင် သူတို့အချင်းချင်း ကစားပြီး ပျော်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ၃ နှစ်ကနေ (၅) နှစ်လောက်လည်း ရွယ်တူ ကစားဖို့ သူငယ်ချင်းလိုသလို ကျောင်းတက်တဲ့ (၅) နှစ် ကနေ (၁၆)နှစ် စသဖြင့် ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် သူငယ်ချင်းလိုတာပါပဲ၊ တဖြည်းဖြည်း (၁၈)နှစ် လောက်ကနေ အရွယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းအပြင် သူငယ်ချင်းချစ်သူတွေရှိချင်ကြတယ်။ ရလည်းရကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကြင်ယာ/ခင်ပွန်းတွေ အဖြစ် လက်တွဲပြီး ဘဝခရီးစသွားကြတာအများကြီးပါ။
ချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့ အတွက် သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ ဘဝကနေ စကြတာပါ။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ အရေးမကြီးဘူးလား? ကျွန်မတို့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတိုင်းကတော့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ relationship တွေ ရနိုင်ဖို့ ဆန္ဒတွေရှိကြတာပါပဲ ဒီတော့ သူငယ်ချင်း အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ စကြရအောင်နော်။
သူငယ်ချင်းဆိုတာက ဘာနဲ့မှ မတူတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်။ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ရတဲ့အတွက် မိမိရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပေးတယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းရရှိတဲ့ အတွက် stress ကိုလျော့စေတယ်။ အထီးကျန်ဆန်မှုမရှိဘူး၊ မိမိစိတ်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ် စေတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။
ရင်းနှီးတဲ့ အနီးကပ်သူငယ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီသူက ဆေးလိပ်တို့ အရက်တို့ကို အဖော်ပြု နေတတ်တယ်။ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ထိုင်ပြီး T.V ကြည့်တာ၊ Game ﻿ဆော့တာတွေပဲလုပ်နေမယ်။ အထိုင်များတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။ တချို့ကတော့ အခုလိုပြောမယ်။ ငါ့မှာ online က သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ၁၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဒါကမတူပါဘူး၊ အနီးကပ်သူငယ်ချင်းက သူနဲ့ အတူအချိန်ကုန်လွန် စေမယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကူညီနိုင်မယ်။ တိုင်ပင်နိုင်မယ်၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လိုအပ်တာ တွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်။ ဒီတော့က active social life ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီလို ချစ်ချင်ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်း ချစ်သူရဖို့ဆိုတာ အချိန်ယူရပါတယ်။ ပိုပိုပြီး ချစ်ခင်ရင်းနှီးနိုင်အောင် မိမိက လုံ့လစိုက်ထုတ်ရတယ်။ ကိုယ်က အပြုသဘော﻿ဆောင်တဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားနဲ့ အပြင်ပန်းကနေ တွန်းအားတွေ လုပ်ယူပြီး မိမိတို့ နှစ်ဦးစလုံး စိတ်ပျော်ရွှင်အောင် အချိန် ဖြုန်းနိုင်ရပါ့မယ်။
နှစ်ဦးအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ တစ်ဦးက ဆေးလိပ်သောက်တာ မကြိုက်ရင် ဆေးလိပ်ကို စွန့်လွှတ် လိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ပိုပြီး ကြိုးစားနေပြလိုက်ပါ။ အခုလိုပြုမူလိုက်ရင် တစ်ဖက်သူငယ်ချင်း/ သူငယ်ချင်းချစ်သူ ဆီကနေ အားပေးတိုက်တွန်းတာတွေ ရလာမယ်။ ဒီလိုအားပေးမှုတွေ တိုက်တွန်း မှုတွေဟာ မိမိကို တွန်းအားတွေရစေတယ်။ Will power ကို မြင့်စေပြီး ကိုယ့်ဘဝမှာ အောင်မြင်မူရစေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို မြှင့်တင်ပေးသလို ဖြစ်စေပါတယ်။
မိမိချစ်ရတဲ့ သူ့ဆီကနေ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ရစေဖို့ဆိုရင် မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထိုက်တန်တဲ့ တန်ဖိုးကို မိမိဘာသာ မြှင့်တင်နိုင်ရမယ်။ ဒါကတော့ give and take ပါပဲ ဒီလိုပြုမူမယ်ဆိုရင် တဖက်ဆီကနေ သင့်ကို အလိုရှိတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်သလို နောက်ဆက်တွဲ မိမိရဲ့ ဘဝတစ်သက်တာမှာ တစ်ဘက်လူက အလိုအလျောက် လာရောက် ပေါင်းသင်းချစ်ခင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Relationships ဆိုတာ ဘဝမှာ အချက်အခြာကျတဲ့ အခန်းကန္တကပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုမှ နေလို့မရပါဘူး။ We cannot live without them. ဒါကြောင့် ရေရှည်အတွက် relations လိုသလို ဒီ relationship ကိုလည်း တာရှည်တည်တံ့ နေအောင် ခက်ခဲ ဆုံးဖြစ်ပေမယ့် ဘဝအတွက် ကြိုးစားရှင်သန်ကြိုးစားအားထုတ် ကြရ အောင်ပါလို့ တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
" လူငယ်နှင့်အင်တာနက် "
တိုးတက်တဲ့ ကျောင်းသားဖြစ် အောင် ဘယ်လိုထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ သင်ပေးမလဲ။
(အချစ် နှင့် ရမက်) Love& Lust
အမျိုးသမီးတွေ ကျန်းမာရေးဟာ မိသားစုအတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း